Tag: gbasaa | Martech Zone
Dịka akara ụwa, ị nweghị ndị na-ege ntị n'ụwa niile. Ndị na-ege gị ntị nwere ọtụtụ mpaghara na mpaghara. N'ime n'ime ndị na-ege ntị ọ bụla nwere akụkọ doro anya iji jide ma gwa. Akụkọ ndị ahụ apụtaghị n'ike n'ike. A ga-enwerịrị ụzọ ịchọta, ijide, na ịkekọrịta ha. Ọ na-achọ nkwukọrịta na imekọ ihe ọnụ. Mgbe ọ mere, ọ bụ ngwaọrụ dị ike iji jikọta akara gị na ndị na - ege gị ntị. Ya mere, olee otu i si eme
Ala Nkwa ahụ: Azụmaahịa na-adịgide adịgide ROI Dị n'Ihu
Tuesday, October 20, 2015 Fraịde, Ọktọba 23, 2015 Katie Karr
Nabata na ndị ọkachamara na-ere ahịa na-akpọ Oge Ahụmịhe Ndị Ahịa. Site na 2016, 89% nke ụlọ ọrụ na-atụ anya ịlụ ọgụ na ndabere nke ahụmịhe ndị ahịa, na nke 36% afọ anọ gara aga. Isi mmalite: Gartner Dika omume na teknụzụ ndị ahịa na-aga n'ihu na-aga, usoro ịre ahịa ọdịnaya gị kwesịrị igbado njem ndị ahịa. A na-ejikwa ahụmịhe na-enwe ihe ịga nke ọma ugbu a - mgbe, ebe na otu ndị ahịa chọrọ ya. Ahụmahụ dị mma na ọwa ahịa ọ bụla bụ
Ọ bụ ezie na ịkọ akụkọ ọhụụ na-abụ ihe ọhụrụ, echiche nke ịre ahịa anya abụghị. 65% nke ndị mmadụ n'ozuzu bụ ndị mmụta anya, ọ bụghị ihe nzuzo na onyonyo, eserese na foto bụ ụfọdụ ọdịnaya nwere mmasị na ntanetị mmekọrịta. A na-ewere ahịa ndị a na-ahụ anya ka ọ dịkwuo n'ihu site na ịmepụta na ịkwanye echiche nke ịkọ akụkọ ọhụụ ebe anyị na-eji ihe oyiyi akọ akụkọ. Gini mere eji Eme ihe omuma? Sayensị na-agwa
ProofHQ bụ sọftụwia na - egosi SaaS nke dabere na ntanetị nke na - eme ka nyocha na nnabata ọdịnaya na akụ okike wee mezuo ngwa ahịa na ngwa ngwa. Ọ na-anọchi usoro email na usoro nnomi siri ike, na-enye ndị ọrụ nyocha nyocha iji nyochaa mmekọrịta na-emepụta ọdịnaya, na ndị na-ahụ maka ọrụ njikwa ọrụ iji soro nyocha na-aga n'ihu. Enwere ike iji ProofHQ gafee mgbasa ozi niile gụnyere mbipụta, dijitalụ na ọdịyo / visual. Otutu, a na-enyocha ma mepụta ihe okike iji ya
N’okwu ndị gara aga, anyị tụlere ihe Nlekọta Ahịa Dijitalụ Bụ, Ihe kpatara Digital Asset Management ji dị oke mkpa maka Azụmaahịa n’ozuzu ya, yana Etu aga - esi zụta ihe efu nke Digital Asset Management. Na ozi infographic a site na Widen, ha na-akọwapụta nke ọma otu esi ejikwa akụ na ụba dijitalụ ga-enyere gị aka itinye usoro njikwa ọdịnaya dị mma karị. Kpọmkwem, ụlọ na nyochaa ọdịnaya gị na ebe nchekwa dị na-arụ ọrụ nke ọma karịa ịnwe ọdịnaya agbasasịa